၁။ ဂျုံဒိုးကို Oven ထဲထည့်ကာ အပူချိန် ၂၀၀ဒီဂရီ ဖြင့် ၁၀ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပေးပါ။
Posted in ပီဇာ ဖုတ်နည်း | 22 Comments
look very nice but ko cook ma bae eat ya top mar ma lote tae loe 🙂
thz u so much ma wut yee … 🙂 because of I can make it … that is the nice taste 😉
thank u wut yee yay… ama lae pizza lote sarr chin lo win shar lite tar…ataw pae… 😀
Plz try ma July.. Pizza is really good taste!! 🙂
Htet ရေ Yeast ကိုပါမုန့်တို့၊ ပီဇာတို့ ဖုတ်လျှင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာမို့ yeast ပဲထည့်စေချင်ပါတယ်။ baking yeast လို့ ဘယ် Supermarket မှာမဆိုပြောဝယ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်… 🙂
sorry it is cheese! you can find any market place! 😀